Hogaamiye Jihaadi reer Suuriya ah oo lagu dilay qarax Ismiidaamin ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hogaamiye Jihaadi reer Suuriya ah oo lagu dilay qarax Ismiidaamin ah
Xalab – Mareeg.com: Hogaamiye jihaadi ah oo u dhashay dalka Suuriya, laguna magacaabi jiray Muxamed Bahiya, kuna magaca dheeraa Abuu Khaalid Al-suuri ayaa lagu dilay qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Xalab ee ay ku dagaallamayaan ciidamada madaxweyne Bashaar Al-asad iyo kooxaha kala duwan ee mucaaradka ah.
Abuu Khaalid Al-suuri ayaa ahaa hogaamiyaha Jabhadda Islaamiga ah ee Axraaru-shaam ee xiriirka la leh Alqaacidda, waxaana la dilay isaga iyo koox kale kadib markii qof ama labo soo xirtay walxaha qarxa ay ugu galeen xarruntiisa woqooyiga magaalada Xalab.
Waxaa la rumeysan yahay in Abuu Khaalid Al-suuri uu ahaa aasaasaha iyo hogaamiyaha mid ka mid ah kooxaha Islaamiga ah ugu awooda badan dalka Suuriya ee la dagaallama nidaamka Bashaar Al-asada, taasoo lagu magacaabo Axraaru-shaam.
Sidoo kale, waxaa la rumeysan yahay in Abuu Khaalid Al-suuri ahaa wakiilka dalka Suuriya u joogay hogaamiyaha Al-qaacidda Dr. Ayman Al-dawaahiri.
Abuu Khaalid Al-suuri ayaa la sheegay inuu isku dayey inuu dhexdhexaadiyo laba jabhadood oo jihaadi ah, xiriirna la leh Alqaacidda, kuwaasoo kala ah: Jabhatu-nusra iyo kooxda dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam ee loo soo gaabiyo Daacish.
Wuxuu Abuu Khaalid Al-suuri badiyey dhaleeceynta kooxda dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam, taasoo dagaallo dhiig ku daadatay la gashay dhowr kooxood oo jihaadi ah, waana kooxda looga shakisan yahay dilkiisa.
Dilka Abuu Khaalid ayaa la rumeysan yahay inuu sii xoojin doono dagaalka u dhaxeeya kooxda dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam iyo kooxaha kale ee Islaamiyiinta ah oo ay horay u dhex mareen dagaallo galaaftay nolosha boqolaal dagaalyahan.
Hogaamiyaha qaraxa lagu dilay Al-suuri ayaa ah mid ka mid ah sababaha Mareykanku uga gaabsaday inuu hub siiyo kooxaha dagaalka kula jira nidaamka Bashaar Alasad, maadaama uu ku xirnaa hogaamiyaha Alqaacidda.
Hogaamiye Muxamed Bahiya, kuna magaca dheeraa Abuu Khaalid Al-suuri ayaa ahaa dagaalyahan hore oo ka tirsan Alqaacidda, wuxuuna Mareykanka kula dagaallamay Afgaanistaan iyo Ciraaq, wuxuuna si dhow ula shaqeeyey hogaamiyihii la dilay ee Al-qaacidda Usaama Bin Laden.